Askar looxirey dilka taliye Maxaadeey oo xabsiga loo taxaabay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Askar looxirey dilka taliye Maxaadeey oo xabsiga loo taxaabay
Askar looxirey dilka taliye Maxaadeey oo xabsiga loo taxaabay
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku dhigay Ciidan ku sugnaa Kontroolka Hoteelka Naasahablood2 ee Muqdisho oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilkii Taliyihii Ururka Gorgor ee Kumaandooska Ciidanka Xoogga dalka iyo Mid ka mid ah Ilaaladiisa.
Askarta ayaa rasaas ku furtay gaari uu saarnaa taliyaha Ciidanka Gorgor, waxaana uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray rasaasta lagu furay.
Taliye ku xigeenka Labaad ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sakiyo Xuseen Axmed ayaa xaqiijisay in dhammaan la xiray Ciidankii ku sugnaa Kontoroolka uu dhibku ka dhacay, islamarkaana hadda ay ku socdaan baaritaano.
Ciidanka rasaasta furay ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in ay ahaayeen Ciidamo Boolis ah oo ilaalo ka haayay Hoteelka Naasahablood 2 oo hadda loo bedelay Maaido.
Taliye Maxaadeey ayaa soo noqday Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynayaashi hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, sidoo kale waxaa uu ka mid ahaa saraakiishii dalka dibaddiisa waxbrashada u aaday.